ओली पदाधिकारी व्यवस्थापनमा, नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव ! | Safal Khabar
ओली पदाधिकारी व्यवस्थापनमा, नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव !
शनिबार, ११ मंसिर २०७८, ११ : ४०
चितवन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पदाधिकारी व्यवस्थापनमा लागेका छन् । जसकारण बन्दसत्रमा ढिलाइ भएको छ । सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नछाडेपछि ओलीले उनीसँग छलफल गरेका थिए । ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरेको चर्चा छ ।
शुक्रबार महाधिवेशन स्थलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले थपेको पदाधिकारीमा कुन व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो ओलीले सफारी पार्कबाट लगाउने भएका छन् । ओली बसेको होटल सफारी पार्कमै अहिले पदाधिकारी बैठक बस्दै छ । जसकारण बन्दसत्र अझै लम्बिने देखिएको छ ।
शनिबार बिहान १० बजे सेभन स्टारमा सुरू हुने भनिएको बन्दसत्र साढे ११ बजिसक्दा पनि सुरू भएको छैन । प्रतिनिधिहरू सबै ओलीलाई कुरिरहेका छन् । हिजो पनि ८ बजे केन्द्रीय कमिटी बोलाएर ओली राति ११ बजे पुगेका थिए ।